कस्तो छ अनमोल र अदीतिको ‘कृ’ नयाँ पोस्टर ? « Ramailo छ
कस्तो छ अनमोल र अदीतिको ‘कृ’ नयाँ पोस्टर ?
अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ को एक्सन पछि रोमान्टिक लुक्स रिलिज गरिएको छ । सार्वजनिक दोश्रो पोस्टरमा अनमोलको अंगालोमा नायिका अदिती बुढाथोकी छन् । ‘कृ’ को पोस्टर टौवा क्रियशनले डिजाइन गरेको हो । फिल्मको ट्रेलर यही शुक्रबार रिलिज हुँदैछ ।
सुवास ईन्टरटेन्मेन्ट प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको कृ लाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका छन् । कृ मा भुवन केसीको द सुपर काजोल फिल्मस् पनि प्रस्तुतकर्ताको रुपमा आवद्ध छ । रिभेञ्ज लभ स्टोरी फिल्ममा अनमोल र अदिती बुढाथोकीसँगै सरोज खनाल, रुपा राना, अनुपविक्रम शाही, कामेश्वर चौरासिया लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
‘होस्टल’, ‘जेरी’, ‘ड्रिम्स’ र ‘गाजलु’ पछि अनमोल अभिनित ‘कृ’ माघ २६ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रदर्शनमा आउँदैछ । झण्डै दुई वर्षको अन्तरालमा दर्शकमाझ आउन लागेका अनमोलको कृ प्रतिक्षित छ । यो भिडियो हेर्नुस् :